Ungayisebenzisa kanjani imibhalo engezansi ku-YouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungayisebenzisa kanjani imibhalo engezansi ku-YouTube?
May 12, 2021 0 Comentarios 531
Yenza kusebenze imibhalo engezansi yevidiyo ethunyelwe ku-YouTube kuqondile. Uma ungazi ukuthi ungakwenza kanjani, ungakhathazeki. Sizokufundisa konke ngaleli thuluzi elithakazelisayo elifaka ipulatifomu yevidiyo yokusakaza edumile futhi esivumela ukuthi sibuke okuqukethwe ngolunye ulimi.
Imibhalo engezansi ku-YouTube ayisebenzi ku- baqonde lawo mavidiyo akwezinye izilimi kodwa futhi kuyindlela engavamile kulabo abanokuthamba okuthile kokuzwa. Namuhla sikukhombisa indlela elula nesheshayo yokwenza lo msebenzi usebenze kwi-PC noma ku-APP.
Kungani imibhalo engezansi ibalulekile ku-YouTube?
Abasebenzisi abaningi namanje abakuqondi ukubaluleka kwemibhalo engezansi ngaphakathi kwesikhulumi se-YouTube. Zingaba usizo kulezo zikhathi lapho sifuna ukudlala ividiyo ngolunye ulimi noma lapho nje sisendaweni enomsindo omkhulu lapho kungenzeki khona ukuzwa umsindo wevidiyo.
Imibhalo engezansi nayo ube enye indlela enhle kakhulu ezimweni lapho sisezikhaleni lapho umsindo wamavidiyo ungeke uzwakale noma ungafanele uzwakale ngevolumu ephezulu.
Noma ngabe yisiphi isizathu, into ebalulekile ukuthi I-YouTube isinikeza ithuba lokusebenzisa imibhalo engezansi. Inqubo yokukwenza ilula futhi iyashesha, futhi okuhle kunakho konke ukuthi sizokwazi ukuyilungiselela kusuka kwi-PC noma nakuhlelo lokusebenza lweselula.
Cupha imibhalo engezansi kusuka ku-PC
Ukwenza kusebenze imibhalo engezansi ku-YouTube kwikhompyutha yethu Sizodinga ikhompyutha enoxhumano lwe-inthanethi kuphela. Ngeke kudingeke ukulanda ezinye izinhlelo zokusebenza noma izinhlelo. Nazi izinyathelo okufanele sizilandele:
Vula I-Youtube kusuka kusiphequluli sakho se-PC ngokungena youtube.com
Sesha ividiyo ofuna ukuyidlala
Chofoza kusithonjana "ukumisa”Lokho kuvela ezansi kwewindi lokudlala.
Chofoza ku- "Subtítulos"
Khetha elula kakhulu ngokusho kolimi
Ilungile. Ividiyo manje izovulwa imibhalo engezansi
Uma kwenzeka ufuna vala imibhalo engezansi Kuvidiyo, kufanele uphindaphinde isinyathelo ngasinye esichazwe ngenhla bese ungahloli ibhokisi "lemibhalo engezansi":
Vula imibhalo engezansi kusuka kudivayisi ye-iOS
Inqubo yokwenza kusebenze imibhalo engezansi kusuka kudivayisi ye-iOS nayo ilula impela. Uma ungazi ukuthi ungakwenza kanjani, naka igxathu negxathu okufanele ulilandele:
Vula I-Youtube kudivayisi yakho ye-iOS
Izindawo bese udlala ividiyo oyithandayo
chofoza ngenhla kwamachashazi amathathu amile avela ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini.
Chofoza ku izinketho zemibhalo engezansi (CC) bese ukhetha okulula kakhulu ngokuya ngolimi.
Yenza kusebenze imibhalo engezansi kusuka kuhlelo lokusebenza lwe-Android
Kusuka kuhlelo lokusebenza leselula le-YouTube I-Android kungenzeka futhi ukwenza kusebenze imibhalo engezansi yanoma iyiphi ividiyo:
Vula isicelo se-Youtube kuselula yakho
Sesha futhi ukukhiqiza ividiyo oyithandayo
chofoza ngaphezulu kwamaphoyinti amathathu amile (ekhoneni eliphezulu kwesokudla)
1 Kungani imibhalo engezansi ibalulekile ku-YouTube?
2 Cupha imibhalo engezansi kusuka ku-PC
3 Vula imibhalo engezansi kusuka kudivayisi ye-iOS
4 Yenza kusebenze imibhalo engezansi kusuka kuhlelo lokusebenza lwe-Android
Ungasenza kanjani isibhengezo se-Youtube?
Ungayisebenzisa kanjani imodi ye-Youtube incognito?